M.M.Qabridahar Iyo Tababar Loo Qabtay Macalimiinta Luuqada Afka Soomaaliga - Cakaara News
M.M.Qabridahar Iyo Tababar Loo Qabtay Macalimiinta Luuqada Afka Soomaaliga
Qabridahar(cakaaanews)Axad, 10ka December 2017. Waxaa meel fiican maraya Tababar kor loogu qaadayo garaadka aqoomeed ee macalimiinta luuqada afka soomaaliga, kana soo qaybgaleen qaar kamid ah macalimiinta degmooyinka hoosyimaada gobolka Qoraxey kaasoo si habsamileh uga socda magaalada qabridahar.
Hadaba, tababarkan ayaa warbaahinta deegaanka uga warbixiyay khabiirka sare oo katirsan waaxda Hor-Macalimiinta Iyo Hog-waxbarashada ee xafiiska waxbarashada DDSI ahna madaxa kooxda fulinaysa tababarkan mudane Maxamuud Cabdi Aamin oo sheegay in tababarkan ay fulintiisa iska kaashadeen xafiiska waxbarashada DDSI iyo Hay’ada USAID mashruuca RTI islamarkaana lasiinayo barayaasha luuqada afka soomaaliga ee fasalada 5aad ilaa 8aad kuwaasoo laga soo kala xulay dhamaan degmooyinka Gobolka Qoraxey. Wuxuuna xusay in tababarkani uu soconayo mudo 10 cisho ah. Iyadoo casharada lasiinayo barayaashana ay kusaabsan yihiin luuqada Afka-soomaaliga akhriska iyo qoraalkeedaba iyo waliba nidaamka ama shuruucda baris barasho ee looga baahanyahay macalinka luuqada.
Sidookale, Sidookale Mudane Cabdi Cabdulaahi oo ah khabiir sare oo katirsan waaxada horumarinta macalimiinta ee xafiiska waxbarashada DDSI kana mid ah xubnaha tababarka fulinaya oo isnakahadlay ayaa sheegay in tababarka iyo cashar bixinta ay sifiican uwadaan islamarkaana ay nidaamka cashar bixintu isugu jirto mid theory ah iyo practical labadaba,. Wuxuuna tilmaamay inay jiraan laylisyo kooxo kooxo iyo shaqsi shaqsi laisagudirayo kadibna lasoojeedinayo.
Dhanka kale, barayaashii kasooqaybgalay tababarkan oo dareenkooda kahadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin tababarkan kusaabsan luuqada afkasoomaaliga ee uu xafiiska waxabarashada DDSI u qabtay. Waxayna xuseen in sifiican casharadu ugu socdaan islamarkaana ay sifiican uga qaybqaadanayaan casharka.
Iskusoowada duuboo, tababarkan ayaa kamid ah mashruuc ay maalgalintiisa bixisay Hay’ada USAID islamarkaana kor loogu qaadayo 7 luuqadood oo kamid ah luuqadaha dalkeenan Ethiopia taasoo ay kujirto luuqada afkeena hooyo ee afka soomaaliga. Iyadoo tababarkana laga filayo kadib markuu dhamaado in uu waxwayn katiro doono dhanka nidaamka baris barasho ee udhaxeeya macaliinta luuqada afka soomaaliga iyo ardayda fasalada 5aad, 6aad, 7aad iyo 8aad.